Princess Cruises na -ebepụ Australia & New Zealand ruo Jenụwarị 27, 2022
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Princess Cruises na -ebepụ Australia & New Zealand ruo Jenụwarị 27, 2022
Akụkọ na -agbasa Australia • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Ịtụ egwu • Akụkọ ọhụrụ New Zealand • News • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Princess Cruises gara n'ihu ịmalite atụmatụ ịmalite njem na United States
Akụkọ ọjọọ ahụ na -aga n'ihu maka ụlọ ọrụ njem ụgbọ mmiri yana maka ndị njem nọ na Australia ma ọ bụ New Zealand, ma ọ bụ ndị chọrọ itinye ala n'okpuru njem ụgbọ mmiri na -aga n'ihu, opekata mpe ruo Jenụwarị 27. Ọ pụtara na ịgaghị na Australia na New Zealand na -aga na Princess. Cruises na yikarịrị ndị ọzọ.
Princess njem ụgbọ mmiri na -agbatịkwu oge ezumike ya na ezumike ụgbọ mmiri na Australia/New Zealand ruo Jenụwarị 27, 2022,
Nke a bụ n'ihi ejighị n'aka na nloghachi njem ụgbọ mmiri na mpaghara.
N'ihi ndọtị nkwụsịtụ, a ga -akagbu njem ụgbọ mmiri Coral Princess ruo Jenụwarị 17 na oge a na -akagbu oge Royal Princess na Sapphire Princess ruo March 2022.
Deanna Austin, onye isi ndị isi azụmahịa Princess Cruises kwuru, "Ọ bịara doo anya na anyị agaghị enwe ike ibuga mbughari nke Royal Princess na Sapphire Princess na Australia tupu ha amalite njem njem ha nke edere edere nke ugwu." "Anyị ghọtara na ndị ọbịa na -eme atụmatụ njem ụgbọ mmiri n'oge ọkọchị a na -ewu ewu na oge ezumike afọ ọhụrụ ga -enwe mmechuihu na mgbanwe ndị ahụ, agbanyeghị, anyị chọrọ inye ndị ọbịa ọkwa dịka o kwere mee ka ha nwee ike ịhazi ezumike ha nke ọma."
Maka ndị ọbịa edere n'ụgbọ mmiri kagbuo, ndị ọbịa nwere nhọrọ ịkwaga n'ụgbọ njem nha anya. Usoro mgbazigharị ahụ ga -enwe abamuru agbakwunyere nke ichebe ọnụ ahịa ndị ọbịa na njem ụgbọ mmiri nnọchi ha. N'aka nke ọzọ, ndị ọbịa nwere ike họrọ kredit ụgbọ mmiri ọdịnihu (FCC) nke ya na 100% nke ụgwọ njem ụgbọ mmiri akwụ ụgwọ yana mgbakwunye FCC ọzọ anaghị akwụghachi ego ya ka 10% nke ụgwọ ụgbọ mmiri akwụ (opekata mpe $ 25 USD) ma ọ bụ nkwụghachi zuru ezu na mbụ. ụdị ịkwụ ụgwọ.
Princess ga echedo ndị ọrụ na-ahụ maka njem njem na ntinye akwụkwọ nke a kwụrụ ụgwọ zuru oke maka ọrụ dị oke egwu ha na-arụ na azụmaahịa na ihe ịga nke ọma.
Ozi kachasị na ntuziaka maka ndị ọbịa edere akwụkwọ ndị mgbagha ndị a metụtara, yana ozi ndị ọzọ gbasara FCC na nkwụghachi, enwere ike ịntanetị na Ozi gbasara ụgbọ mmiri emetụtara na kagbuo.